Yini inkungu, yakhiwa kanjani futhi inezingozi zini | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezimo zesimo sezulu ezifana inkungu okwenzeka lapho amafu esezingeni lomhlabathi. Izimo ezithile zemvelo ziyadingeka ukuze lokhu kwenzeke. Inkungu ivame ukunciphisa ukubonakala futhi ingaholela ezingozini ezithile. Ngokuqinisekile uzwile ngoJehova inkungu.
Kule ndatshana sichaza ukuthi iyini inkungu nokuthi ihlobene kanjani nenkungu. Ngaphezu kwalokho, sikutshela izici zayo nemibandela yokuqeqeshwa kwayo.
2 Ukwakheka nezici
3 Izingozi ezingenzeka ze-haze
Isizathu lapho kubonakala khona inkungu siyehluka, yize ihlala iphendula ezimweni ezithile ezithile. Isimo sokuqala okufanele kuhlangatshezwane naso ukuze kwakhiwe inkungu yilesi ukupholisa okukhulu kwenhlabathi ebusuku. Lapho inhlabathi iphola ngobuningi, ungqimba lomoya onomswakama ovela kakhulu engxenyeni eseduze yenhlabathi. Uma umoya uqoqa eduze kwenhlabathi futhi uhlala umswakama, kuzodala ukugcwala. Esinye isimo sokwakheka kwenkungu lapho umoya oshisayo uhamba endaweni ebandayo. Kungenzeka futhi lapho umoya oshisayo uhamba ngaphezu kolwandle olubandayo (ngakho-ke, kuvame ukubonakala ezindaweni ezineqhwa).
Kodwa-ke, inkungu ikhomba solstice ebusika ngokwe-etymology yayo. Esikhathini esedlule, inkungu yayisetshenziselwa ukuqamba isikhathi sasebusika. Lokhu kushintshile namuhla. Manje leli gama lisetshenziselwa ukubhekisa enkungwini. Ngokuqondile ikakhulukazi enkungwini eyenzeka olwandle. Njengoba sishilo ngaphambili, lokhu kwenzeka lapho inqwaba yomoya oshisayo isondela emfudlaneni wamanzi osezingeni lokushisa eliphansi. Yile ndlela amanzi agcwala ngayo futhi aphenduke umhwamuko wamanzi ozoveza ukuqhuma.
Umphumela oseduze we-haze ukuthi, njengoba kuyinto esemkhathini lapho kunezinhlayiya zamanzi eziningi ezimisiwe emoyeni ezigcwele, kwenza ukubonakala kube nzima. Inkungu ingaba yingozi ezikebheni njengoba ingashaya okuthile. Yize le ngozi incishiswe kakhulu eminyakeni yamuva ngohlelo lokulandela umkhondo oluqondiswe yi-GPS.
Ngamagama amaningi ezobuchwepheshe besimo sezulu, i-haze ifana nohlobo lwenkungu. Ihlukile kokuyinhloko ezingeni layo le- umswakama. Ukuze kuthathwe njenge-haze, izinga lomswakama kufanele lilingane noma libe ngaphezu kwama-70%. Lokhu akunjalo ngenkungu ejwayelekile. Lapho lolu hlobo lwenkungu lwenzeka, Njengoba kunomswakama omningi emvelweni, ukubonakala kuncishiswa kakhulu ebangeni eli-1 km nje.
Ukwakheka kwenkungu kuyizakhi ze-hygroscopic namanzi. Ihluke kakhulu kunkungu evamile enanini lamanzi emvelweni nasenkungwini, okwakhiwa ngezinhlayiya ezomile. Izakhi ze-hygroscopic zimane nje zingamaconsi amancane esisombululo se-saline noma izinhlayiya zikasawoti ezivela ezilwandle nasezilwandle ezithwalwa isenzo somoya. Lezi zinhlayiya ziphelela emoyeni futhi zijiyane nomswakama osemoyeni. Ukuze ukugcwala kwenzeke, kufanele kube nezinga lokushisa eliphansi kuneliphezulu.
Njengoba kukhona ukudideka ngalawa magama, kunabantu abaningi abasebenzisa kabi imiqondo yenkungu, inkungu, inkungu noma inkungu. Ukufingqa, Inkungu ukugxila kwezinhlayiya zamanzi ezakha ifu endaweni ephakeme futhi lenza umbono ube nzima. Ngakolunye uhlangothi, yonke eminye imiqondo isuselwa enkungwini. Okungukuthi, ziyizinhlobo ezahlukahlukene zenkungu kuye ngezici abanazo nezimo zomkhathi lapho zakhiwe khona.
Ngomqondo ongokomfanekiso, ukuntuleka kokucaca kungabizwa nangokuthi yi-haze, hhayi iqiniso elilula lokuthi ithe isimo semvelo. Isetshenziswa olimini ukubhekisa kulo ubunzima bokukwazi ukuveza noma ukucabanga kahle noma ukuthi awukwazi ukubona into ethile. Cishe uke wayizwa inkulumo ethi "Ngikhungathekile."
Izingozi ezingenzeka ze-haze
IHaze ngesinye sezimo zezulu ezivamile ezweni lethu. Ngeke sikuphike lokho, noma ngabe kwenza umbono ube nzima, kungasiza ukuthatha izithombe ezinhle kakhulu zamathafa. Ezindaweni ezinezintaba, amathafa nezigodi ezithile kulapho lezi zinkungu zivela kakhulu. Lokhu ngaphandle kokubala, kusobala, ngemisinga yolwandle. I-Cloudiness ivame kakhulu ezindaweni zaseCantabrian nasenyakatho yenhlonhlo. Noma kunjalo, imvamisa yokuba khona kwe-Azores anticyclone ebusika ivumela izinsuku ezingaphezu kwezingama-80 zenkungu ngonyaka.
Isibonelo, endaweni yengcindezi yaseGuadalquivir sithola izinsuku eziningi ngonyaka ngenkungu.
Phakathi kwezingozi okungenzeka ukuthi i-haze ingasinika zona, ithinta kakhulu abashayeli. Uma uhamba futhi ukubonakala kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, awunankinga enkulu noma ingozi. Izinto zishintsha kakhulu uma ushayela emotweni. Uma ungakujwayele ukushayela ngenkungu, kuba lula ukuthi uthole ingozi ngoba awujwayele ukutolika izinto ngokubonakala okuphansi.
Uma usesemotweni futhi uhlangabezana nenkungu ezindaweni ezisogwini, kungcono ukubeka imishayo yakho ephansi ukuze ubonakale. Awudingi ukubeka isikhathi eside ngoba lokho ozokwenza kuzokwenza isimo sibe nzima. Ngokusobala, Ukushayela ngesivinini esincane kuzonciphisa amathuba okushayisana. Uma uhamba nezinye izimoto ngaphambili noma ngemuva, khuphula ibanga lokuphepha.
Ukuze ususe umswakama ovela enkungwini efasiteleni langaphambili, sebenzisa i-wiper ye-windshield. Impela wake wezwa isisho esithi "inkungu ekuseni, ntambama ukuhamba." Lokhu kusho ukuthi inkungu inokubonakala kwayo okuphezulu ekuseni futhi, njengoba umhlabathi ufudumala ngesenzo selanga, iyasula. Umoya ungenye into engasiza ukususa i-haze.
Ngiyathemba ukuthi lolu lwazi lukusizile ukuthi wazi okuningi nge-haze.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Inkungu
Siyabonga ngokuhlanganyela nathi kulesi sidlo sasekuseni olwandle futhi ucacise konke ukungabaza kwethu ngenkungu.
Izintaba Zomhlaba Wonke